Xogta Shirkadda - FOSHAN JIATAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD
Baaldi caag ah
Baaldi Wareega Taxanaha ah
Baaldi Wareega Taxanaha B
Baaldi Wareega C Taxanaha
Baaldi Wareega ee Taxanaha
Baaldi Wareega Taxanaha Ameerika
Foosto caaga ah
Taxanaha Foosto Square
Taxane Foostada leydi ah
Taxanaha Foosto Oval
Caagagga caaga ah
Taxanaha Jarka Bisha Weyn
Taxanaha Jarka Bisha Balaadhan
FOSHAN JIATAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD waxaa la aas aasay sanadkii 2000, taasoo loogu magac daray "FOSHAN JIATAI PLASTIC FACTORY" ka hor.Waxay leedahay waayo-aragnimo wax soo saarka caag xirfadeed in ka badan 20 sano.Waxaan leenahay nashqado wax-qabashada oo ka badan 300 oo nooc, kuwaas oo shirkadu ay ku biirisay lacag badan oo loogu talagalay horumarinta alaabta.
Waxaan cusbooneysiineynaa mashiinka wax soo saarka ee ugu dambeeyay in ka badan 30 qaybood kuwaas oo si buuxda u xaqiijin kara wax soo saarka tooska ah ee alaabta la qaabeeyey ilaa calaamadaynta caaryada.Waxaan helnay shatiga wax soo saarka caagga heerka cuntada sanadka 2019. Waxay ku siin kartaa xal baakad heerka cuntada caag ah ee cuntada.Waxay uga dhigan tahay wax badan shirkadeena kuwaas oo aad waxtar u leh inay kharash gareeyaan baaxadda ganacsiga.
Waxaannu sumcad wanaagsan ku helnay baakadaha cuntada ee macaamiisha gudaha iyo dibadda 3dii sano ee la soo dhaafay.Waxaan nahay ruuxa inaan bixino tayo aad u wanaagsan qiimo macquul ah iyo caadada marka hore iyo ujeedo ku jihaysan adeega dhammaan macaamiisha JIATAI balaastikada.Waxaan sii wadeynaa inaan diirada saarno sidii aan had iyo jeer u horumarin lahayn baakadaha bacaha balaastigga ah, kuwaas oo kuu siinaya xal xirxiro ka wanaagsan adiga.
2020 Si rasmi ah loogu magacaabay "FOSHAN JIATAI PLASTIC PRODUCTS CO., LTD", iyo kordhinta khadka wax soo saarka ee mashiinka, waxay wanaajisaa awoodda wax soo saarka.
2019 Helitaanka shatiga wax-soo-saarka caagga ah ee darajada cuntada, waxay bixisaa xalalka baakadaha cuntada, waxayna aad u caawinaysaa shirkadda inay ballaariso baaxadda ganacsiga.
2018 Wuxuu bilaabay ganacsiga caalamiga ah, waxaa helay ku qanacsanaanta macaamiisha ajnabiga ah.
2013 Fidinta suuqa gudaha iyo kordhinta khadka wax soo saarka.
2008 Samee kooxda D&R si ay u horumariyaan naqshado baaldi balaastik ah oo iyaga u gaar ah.
2005 Diirada saaray alaabta dhalada caaga ah ee warshadaha dhaqida.
2000 Waxaa lagu aasaasay Foshan, Guangdong, Shiinaha.Horay waxaa loogu magac daray "FOSHAN JIATAI PLASTIC PRODUCTS FACTORY".
Waxaan mar walba diyaar u nahay inaan ku caawinno. Waxaa jira siyaabo badan oo lagula soo xiriiri karo. Waxaa laga yaabaa inaad khadka nagu soo rido.Na soo wac ama iimayl noogu soo dir. dooro waxa kugu habboon.
No.5, Chuwei Huafu West Road, Zhangcha, Chancheng Degmada, Foshan, Guangdong, Shiinaha.
© Xuquuqda daabacaadda 2022: Dhammaan xuquuqaha way xafidan yihiin.